Ihe 5 nke kacha mma Cryptocurrency Trading Platform April 2021- Mụta ahia 2
Ihe 5 kacha mma Cryptocurrency Trading Platform 2021!
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa ọ bụla bara uru na-ere ahịa n'ụzọ ụfọdụ, ọdịdị, ma ọ bụ ụdị. A sị ka e kwuwe, anyị na-etinye ego na ihe ndị sitere n'okike na ihe ndị mmadụ mebere kemgbe mmalite oge. Yabụ mgbe cryptocurrencies dị ka Bitcoin were ụwa n'ike, ọ bụ naanị ihe okike na ụwa itinye ego ga-achọ ibe.
Ọ bụ ezie na mkpụrụ ego dijitalụ na-ewu ewu ugbu a na ndị na-ere ahịa na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ, enwerekwa obi abụọ ọ bụla gbasara izi ezi nke cryptocurrencies dị ka klas akụ. Obi abụọ ahụ ekwesịghị ịdị ọzọ - ọkachasị mgbe ị tụlere ụfọdụ ndị isi egwuregwu ugbu a na oghere ahụ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ikpughe na ohere itinye ego na cryptocurrency, ị chọrọ usoro ịzụ ahịa nke nwere ike ime iwu gị yana ịnye akụ a pụrụ ịdabere na ya banyere ahịa cryptocurrency.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị na-enyocha usoro ntanetị kachasị mma nke 2021.
Etu esi ahia ahia Cryptocurrencies?
N’ụdị ya kachasị mkpa, ahia azụmaahịa bụ mgbanwe nke cryptocurrencies. Echiche arụmọrụ dị nnọọ ka ngwaahịa ma ọ bụ azụmaahịa azụmaahịa, ebe ị na-eche maka ọnụahịa nke ngwa ọrụ ego ma nwee olile anya ịba uru ya.
Taa, enwere ọtụtụ cryptocurrencies dị n'ahịa. Agbanyeghị, mkpụrụ ego abụọ kachasị bụ Bitcoin na Ethereum. Otutu cryptocurrencies na-enweta teknụzụ Blockchain, na nke ọ bụla nwere ọkwa dịgasị iche iche. Ugbu a, ha nwere na-eme atụmatụ na-emetụta ego ahịa ọtụtụ, imeghe ulo oru mbo na ahia ohere maka ndị mmadụ na ụdị nile na nha.
Ọ bụ ezie na usoro ọrụ ịzụ ahịa cryptocurrencies nwere ike ịbụ otu ihe ahụ na ndị ọzọ, atụmatụ ndị na-ebu amụma gbasara ngagharị ahịa dị ezigbo iche. Nke a bụ n'ihi na mkpali na-emetụta ahịa ndị ọzọ anaghị emetụta cryptos. Dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ akụ na ụba mba nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na dollar US ma ọ bụ paụnd Britain, mana ọ na-adịkarị na crypto.
N'aka nke ọzọ, mgbe ị na-elele ihe ndị dịka adịghị ike nchekwa ma ọ bụ mmachi iwu na mkpuchi iwu - nke ahụ nwere ike nwere ike imetụta itinye ego nke mkpụrụ ego ahụ.
Gịnị bụ Cryptocurrency Trading Platform?
Azụmahịa azụmaahịa na-enye onye na-etinye ego ohere isonye na azụmaahịa cryptocurrency. Nwere ike ịzụta ma ree cryptocurrencies ndị a site na imeghe akaụntụ na ịrụ ahịa. Mgbe ị matara nke crypto ịchọrọ ịzụ ahịa, ị ga-ebufe ozi ahụ na azụmaahịa azụmaahịa, ọ ga-enyere gị aka ịzụ ahịa ahụ.
Onye na etinye ego nwere ike ịbịaru ahia cryptocurrency n'ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ ịzụta ego dijitalụ n'ụdị mbụ ya. Dika cryptos bu dijitalụ, ị gha echekwa ha na obere akpa gi. Nhọrọ ọzọ bụ iji ahịa CFD rụọ ọrụ ahụ, nke na-enye gị ohere ịga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ na mkpuchi ị họọrọ na-enweghị ịnwe ikike.
Dika ahia ahia ahia ka odi ohuru na mpaghara ulo oru mbo, i gha achota na obughi ahia ahia obula ka a gha edozi. Nke a bụ ikpe karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ego na cryptocurrencies ma zụta akụ na-akpata na ụdịdị kachasị. Dịka, ọ bụrụ na ị dị njikere ahia cryptocurrencies site na CFDs, yabụ enweghị ụkọ saịtị azụmaahịa ndị enyere ikikere site na ngalaba nchịkwa dị ka FCA na CySEC.
Dị ka otu usoro azụmaahịa ọdịnala si arụ ọrụ, a ga-achọ ka ị kwụọ ụgwọ na ọrụ na ebe ị na-azụ ahịa. Nke a dabere na saịtị azụmaahịa yana ogo nke itinye ego gị. Agbanyeghị, ọ naghị esiri ike ịchọta nyiwe azụmaahịa na-enye ọrụ efu na azụmaahịa yana usoro ịsọ mpi.
Kedu ihe kpatara I kwesiri iji zụọ ahịa na saịtị azụmaahịa Cryptocurrency?
Agbanyeghị na ịzụta zụrụ ahịa dị n'ọgbọ egwuregwu cryptocurrency, enwere uru karịa mgbe ịhọrọ maka a Fzụ ahịa CFD saịtị. Otu, ọtụtụ n'ime saịtị azụmahịa ndị a na-enye gị ohere ịnweta akụ ndị ọzọ. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ọdịmma gị na crypto ka ị na-aga n'ihu ịzụ ahịa na ngwa ego ndị ọzọ, ị nwere ike ịhọrọ saịtị azụmaahịa na-ekpuchi ntọala abụọ.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime uru nke ịzụ ahịa na CFD crypto broka:
Nweta uzo ahia ahia cryptocurrency
Nhọrọ iji gaa CFD ma ogologo ma mkpụmkpụ
Arụ ọrụ 24 awa ụbọchị
Paymentzọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche dị
Usoro ndebanye aha dị mfe
Egwuregwu ego asọmpi
Nhọrọ iji rụọ ọrụ na nhazi usoro ntinye ego
N'akụkụ tụgharịa, a na-eche na azụmaahịa mkpuchi dị egwu. Ọ gwụla ma ị nwere ezigbo ihe ọmụma banyere ma cryptocurrency ma ụlọ ọrụ itinye ego, ọ nwere ike ịbụ nnukwu ihe ịma aka irite uru. Enwekwara oge ụfọdụ nke ngabiga nchebe nke nwere ike imetụta oke ọnụ ahịa nke cryptocurrencies, yabụ buru nke a n'uche.
Karịsịa, dịka ụfọdụ ụlọ ọrụ anaghị achịkwa nke ọma, ọ dị mkpa ka ị rapara na nyiwe azụmaahịa nke otu ụlọ ọrụ nyere ikike.
Ofdị Platform Trading Cryptocurrency
Na ngalaba nke gara aga, anyị kwuru ụzọ abụọ dị iche iche ndị na-achụ ego nwere ike isi tinye ego na oghere ego dijitalụ - ikike ọdịnala na azụmaahịa CFD.
N'okpuru ebe anyị na-atụle ụzọ abụọ a n'ụzọ zuru ezu.
1. Inwe Cryptocurrencies
Ndị ahịa nwere ike ịzụrụ ma nwekwaa cryptocurrencies iji zụọ ha ma emechaa. Ndị na-achụ ego na-elele anya ogologo oge n'ahịa, na-enwe olileanya na ọnụahịa ga-arị elu n'ọdịnihu. Agbanyeghị na cryptocurrencies dị naanị afọ iri na otu, ha ewerela ụzọ dị mma iji bawanye ọtụtụ uru.
N'okwu a, ị ga-anabata 100% nwe akụ ma chekwaa ha na obere akpa gị. Ọ bụrụhaala na ndị a ka nọ na obere akpa gị, ọdịda nke usoro azụmaahịa agaghị emetụta gị. Agbanyeghị, a na - enwekarị ohere iji nweta obere akpa ego maka nchekwa - yabụ ị ga-elezi anya nke ọma n’ichebe akụ gị.
Ndị ọkachamara tụrụ aro ka ịchekwa cryptocurrencies na obere akpa ngwaike. Ọ bụ ezie na nchekwa, ọ nwere ike ịme usoro ịme azụmahịa na bitcoin a siri ike karị. Ọ bụrụ na ị na-atụ anya ịzụ ahịa ugboro ugboro, ị ga-achọ ihe ọzọ ka mma nke ga-arụ ọrụ nke ọma.
2. Cryzụ ahịa Cryptocurrencies site na CFDs
Imirikiti nyiwe nke azụmaahịa na-enye gị ohere ịzụ ahịa cryptocurrency na-enweghị n'ezie mkpụrụ ego ahụ. Nkwekọrịta maka ọdịiche - nke a maara nke ọma dị ka CFDs, ka ị gbanye akụ ahụ site na ịkwụ ụgwọ dị iche na oge mmeghe na mmechi nke nkwekọrịta ahụ.
CFDs Cryptocurrency dị oke ọnụ, mana ọ na-abịa na ịdị mfe nke azụmaahịa na pịa bọtịnụ Site na iji CFDs, ndị na-etinye ego na-eche naanị uru mkpụrụ ego ahụ karịa ịnwe ha.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-atụgharị uche na Bitcoin ma nwee obi ọjọọ. Kama ịzụta mkpụrụ ego ahụ iji ree ya maka uru, naanị itinye ego na mkpụrụ ego ahụ na-atụ anya ka ọnụahịa ahụ dị elu. Otu uru dị mkpa n'iji CFDs bụ na ị nwekwara ike ire ere crypto. Ọzọkwa, imirikiti nyiwe ahia a na-achịkwa na cryptocurrencies na-agba ume ịzụ ahịa site na CFDs kama ịnwe mkpụrụ ego ahụ.
Etu esi etinye ego na nyiwe Cryptocurrency Trading?
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, ịnweta ahịa cryptocurrency site na ego ego bụ ihe atụ na-agaghị ekwe omume. Nke a siri ike nke ukwuu na ndị na-ere ahịa na-achịkwa, yana dịka nke a, mmadụ ga-agakwuru usoro nhazi azụmaahịa na-akwadoghị ma dịrị njikere izere aghụghọ.
Ugbu a, dịka ụlọ ọrụ cryptocurrency na-amali elu, ọtụtụ nyiwe azụmaahịa na-akwado ego fiat na ụzọ ịkwụ ụgwọ echekwara iji nyere aka na ntụgharị. Dị ka usoro ntanetị ndị ọzọ, ịnwe akaụntụ nkwụnye ego ga-eme ka azụmaahịa gị dịkwuo mfe. Taa, usoro ịkwụ ụgwọ dịnụ gụnyere kaadị akụ, nnyefe ụlọ akụ dị na mpaghara, nnyefe waya, na ọbụna e-Wallets dị ka Skrill, Paypal, na Neteller.
Agbanyeghị ebe ịnọ n'ụwa, ịnwere ike ịchọta ụzọ iji kwụọ ma wepụ ego. Agbanyeghị, ịnwere ike ịkwụ obere ego iji kwado azụmahịa ahụ. Ọzọkwa, ụfọdụ nyiwe azụmaahịa na-achọkwa ka ị debe ego nkwụnye ego pere mpe na akaụntụ gị.
Gwọ na isslọrụ na nyiwe Cryptocurrency Trading
Ndị ahịa Crypto na-akwụ gị ụgwọ maka ọrụ ha n'ihe gbasara ụgwọ na ọrụ. E nwere ụdị ụgwọ dị iche iche onye ọ bụla na-etinye ego ga-amata tupu ya abanye na azụmaahịa na saịtị azụmaahịa.
The mgbasa bụ ego na-apụ apụ nke ị ga-ahụ n'ọtụtụ imirikiti usoro ntanetịzụ ahịa. A na-agbakọ ya dị ka ọdịiche dị n'etiti ịzụ na ire ere nke ihe onwunwe. N'ihe banyere cryptocurrencies, ọ dị mkpa ka a gbasaa mgbasa naanị ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa site na CFDs.
Ka anyị leba anya n’ihe atụ a.
Banye na saịtị azụmaahịa itinye ego na cryptocurrency
Place na-etinye a Buy iji na $ 50,000
Ihe ire ere bara uru na $ 51,000.
Mgbasa nke azụmahịa a bụ 2%
Ikwesiri irite uru ma ọ dịkarịa ala site na 2% na azụmahịa a naanị iji mebie ọbụna na ahia a. Ọ bụ ya mere ị ga-eji chọọ ikpo okwu nke na-enye mgbasa dị egwu nke na-agaghị eri uru gị.
Dabere na ikpo okwu ahia, a gha acho ka ị kwuo ugwo na ahia obula. A na-ebo ụgwọ ọrụ ụgwọ na nsọtụ abụọ nke azụmahịa, nke pụtara na ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ maka ịzụta yana ire. A na-anọchi anya ọrụ ahụ na pasent pasent, ego ahụ dabere na isi ahịa.
Tụlee okwu a:
Ebe ahia gị nwere ọnụego ọrụ nke 1%
Mgbe ịzụrụ $ 100 uru nke Bitcoin, a ga-ebo gị $ 1
Mgbe ị na-ere otu Bitcoin ahụ maka $ 200, a ga-ebo gị ụgwọ $ 2
Dị ka e gosiri, ị ga-akwụ a ngụkọta nke $ 3, totaling ọrụ maka ma ịzụ ma na-ere.
Esgwọ na nkwụnye ego na ịkwụghachi ego
Ugboro ole na ole na-azụ ahịa na-etinyekwa ego nkwụnye ego na ego nkwụnye ego na ndị na-etinye ego. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, ị ga-akwụ ụgwọ ego a gbakọtara dịka pasent nke ego niile.
Nke ahụ kwuru, ọ naghị esiri ike ịchọta nyiwe ahia na-akwụ ụgwọ ego nkwụnye ego efu maka azụmahịa. Ndị na-ere ahịa na-ewu ewu na-elegharakwa ọnụego ọrụ anya, yabụ ọ bụ nkesa mgbasa ị ga-atụle.
Kedu Cryptocurrencies ị nwere ike Tradezụ ahịa?
Ahịa ego dijitalụ na-akwado ọtụtụ puku cryptocurrencies ugbu a. Emeputara ihe ndia na-esote ihe ịga nke ọma nke Bitcoin, na taa, nke a na-akpọkarị "alt-coins". Agbanyeghị na a ka na-ahụta mkpụrụ ego dị iche iche dị oke ọnụ ma e jiri ya tụnyere Bitcoin, ọ nwere ike isiri ha ike ịzụ ahịa.
Site na nke ahụ, mkpụrụ ego dịka Ethereum, Ripple, na Stellar Lumens na-enweta nlebara anya nke ndị na-etinye ego. Mkpụrụ ego ndị a na-adaba n'ụdị ihe egwu dị elu, yabụ ịkwesịrị ịkpachara anya maka otu ị si eche echiche na ha.
Etu esi Azụta Cryptocurrencies?
Na mbu, anyị kwuru na ire ere mkpụmkpụ crypto ga-ekwe omume site na CFDs. Nanị ihe ọ pụtara bụ na ị na-azụ ahịa azụ ahịa na otu cryptocurrency, na-enwe olileanya ị nweta uru site na ọdịda ya na-esochi.
Ka anyị gosipụta otu esi ere obere na ikpo okwu CFD cryptocurrency.
Spec na-eche na ọnụego Bitcoin na-agbada n'oge na-adịghị anya
Buru ụzọ tinye ire ere na onye na-ere ahịa gị
Na-ere na osisi nke $ 10,000
Ọnụ ego Bitcoin na-agbada site na 2%
Na osisi nke $ 10,000, nke a sụgharịrị uru nke $ 200
Place na-etinye iwu ịzụta ka ị kpọchie uru gị ma pụọ ​​na ahia ahụ
Na ọnọdụ ụwa n'ezie, ire ihe onwunwe tupu ị nweta ha agaghị ekwe omume. Nke ahụ bụ ebe ndị CFD na-abanye ebe ahụ. N'aka ozo, site na iji CFDs, ndi oru ego ekwesighi inwe nkpuchi nke mbu iji ree ha. Kama nke ahụ, ị ​​na-atụgharị uche naanị maka ọnụ ahịa ya n'ọdịnihu.
Enwere ike inabata ego site na iji Cryptocurrencies?
Enweghị ịlaghachi n'eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị na-achọ ịzụ ahịa cryptocurrencies dị ka Bitcoin na Ethereum. N'iburu nke a n'uche, nyiwe azụmaahịa azụmaahịa ebe ọ bụ na emeela ka ndị na-etinye ego nwee ego. Ọzọkwa, itinye ego n'ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa site na CFDs.
Ogo nke leverage dịịrị gị dabere na ahụmịhe gị dị ka onye na-etinye ego na amụma nke usoro ikpo okwu ị họọrọ cryptocurrency. Mba ọ bụla nwekwara usoro dị iche iche gbasara azụmaahịa cryptocurrency. Nke a ga - enwekwa mmetụta dị ukwuu na leverage ị nwere ike itinye n'ọrụ. Regulationskpụrụ ndị dị otú a na-egbochi ndị na-azụ ahịa mkpọsa ịzụ ahịa na nnukwu ego ma na-efu nnukwu mfu.
Kwuo na ị nwere ike ịzụ ahịa na ntinye nke 5: 1.
Nke a pụtara na ị nwere ike ịzụ ahịa na 5x ego ị nwere na akaụntụ nkwụnye ego gị.
Y’oburu na inwere ego nke $ 100, inwere ike ahia na oke nke $ 500 site na itinye ihe itinye ego.
Rịba ama na uru ọ bụla ma ọ bụ mfu ọ bụla ga-abawanye yana ọtụtụ nhọrọ ị họọrọ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịkwụ ụgwọ dị elu, ị nwere ike ịchọta ndị na-enweghị ego na-achịkwaghị achịkwa na-enye ha. Maka ndị ahịa novice, ijikọta ma leverage na cryptocurrencies nwere ike ịbụ ngwakọta na-egbu egbu n'ihi oke ihe egwu dị na ihu abụọ. Dị ka ndị dị otú a, jide n'aka na ị na-amụta ins na outs nke njikwa ihe egwu tupu ịhapụ ego gị!
Kedu ka nyiwe Cryptocurrency Trading si dị mma?
Cryptocurrency abughi ihe zuru oke n'aka ndi na-acho ya, ya mere, ndi n’enye ego enweghi ike ileghara ohere nke ifufu ego ha anya. Na ihe omume ndị gara aga metụtara hacking, saịtị azụmaahịa ole na ole enweela ike ịkwụ ndị ahịa ha. Otú ọ dị, nke ahụ abụghị ọnọdụ nke onye ọ bụla na-ere ahịa na oghere.
Mgbe ị na-atụnyere usoro azụmaahịa na-enweghị usoro na nke anaghị achịkwa, nke a bụ ihe mbụ ị ga-atụle. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na nyiwe a na-achịkwa, ị ga-enwekarị nchebe. Ọ bụrụ na ị nọ na UK, ị na-achọ ihe FCA nzere ntozu, n'Australia site ASIC, na Saịprọs nke CySEC dere. Ijide ikikere na-agbakwụnye na ntụkwasị obi yana aha ọma nke saịtị azụmaahịa.
Ewezuga iwu, enwere atụmatụ ole na ole ndị ọzọ ị ga-ebu n'uche ma ọ bụrụ na ị kpebie iji ikpo okwu na-abụghị CFD. Yabụ, ị na-azụta cryptocurrency n'ụdị ya kachasị eziokwu - nke pụtara na ị bụ 100% na-ahụ maka nchekwa ya.
Hot vs. Oyi Nchekwa
Nwere ike ịchekwa cryptocurrencies gị na nchekwa nchekwa ma ọ bụ oyi. Nchekwa na-ekpo ọkụ pụtara na obere akpa gị ga-ejikọ na ịntanetị. N'ihe banyere nchekwa oyi, ọ gaghị adị. Ọ bụ ezie na wallets na-ekpo ọkụ na-adaba adaba ịtọlite, wallets oyi dị nchebe. Chọrọ ọkacha mma ebe ịzụ ahịa na-echekwa akụ gị na ebe nchekwa oyi. Nke a ga - echedo akaụntụ gị pụọ n’ihe egwu egwu na mpụga.
Ọtụtụ nyiwe ahia na-agbanwe na nyocha abụọ. Nke a chọrọ ka ị jikọọ akaụntụ gị na ekwentị gị ma ọ bụ email, ekemende na-agbakwunye ọzọ oyi akwa nke nchebe gị trading akaụntụ. Ga-enweta otu Paswọdu Otu Oge na ekwentị gị ị ga-abanye mgbe ịbanye na saịtị ahụ.
Saịtị ahia nke na-enye ndị na-etinye ego aka ijide akaụntụ multisig ga-achọ mbinye aka abụọ ma ọ bụ karịa iji nweta ego ahụ. Dabere na saịtị ahụ, Multisig ga-etinye maka iwepụ ego yana nkwụnye ego.
Izo ya ezo nke Data
Mgbe ị na-eji usoro ịkwụ ụgwọ dịka debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ, ịchọrọ ịchọ saịtị azụmaahịa nke na-ezipụ ozi nkeonwe gị. Dị ka ozi niile echekwara na weebụsaịtị nwere ike ịdaba na hacking, ị ga-echedo nkọwa ịkwụ ụgwọ gị.
Etu ị ga - esi bido iji Platform Trading Cryptocurrency
Maka ndị nwere azụmaahịa n'ụdị ụfọdụ, ịbanye n'ime cryptocurrencies ga-apụta ịgbakwunye ngwongwo ọzọ na pọtụfoliyo gị. N'aka nke ọzọ, ndị mbido ga-achọ enyemaka enyemaka ntakịrị. N'iburu nke a n'uche, n'okpuru anyị depụtara usoro ntụpụ ụkwụ otu esi amalite azụmaahịa na saịtị azụmaahịa cryptocurrency taa.
1. Họrọ saịtị ahia gị
Mgbe i nwere ọtụtụ narị nyiwe ịhọrọ site na, ọ na-esiwanye ike ịmata nke ore ahia bụ nri gị. Ga-ebu ụzọ chọpụta ụdị atụmatụ ị na-achọ yana saịtị kacha mma maka ọdịmma gị. N'agbanyeghị ụdị azụmahịa gị, ịkwesịrị ịhọrọ ebe nrụọrụ weebụ a na-achịkwa na nke na-enye ụgwọ asọmpi na nkwado ndị ahịa nwere ike ịnweta.
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọzọ, anyị edepụtara usoro ntanetị kacha mma nke 2021 na njedebe nke ndu ahụ.
2. Deba aha na Nyochaa Akaụntụ Gị
Iji malite usoro ịzụ ahịa, ihe mbụ bụ imepe akaụntụ na saịtị gị. N'ozuzu, ị ga-enye ozi nkeonwe gị, gụnyere aha gị zuru ezu, adreesị, mba, na nkọwa kọntaktị gị.
Agbanyeghị, iji bido ịzụ ahịa, saịtị ahụ ga-ebu ụzọ nyochaa nkọwa gị. A ga-achọ ka ịnye njirimara gọọmentị nyere gị yana ihe akaebe nke adreesị. Sitesfọdụ saịtị na-anabata mgbazinye akụ okwu ma ọ bụ na ịba uru ego dị ka ihe akaebe nke adreesị. Ozugbo enyochachara njirimara gị, ị ga-enweta ohere zuru oke na ikpo okwu yana atụmatụ ya.
Ihe ntaneti obula choro ka ichoro ahia ahia n'ime ego gi. Nke a na achi achi na ore ahia bụ ike mezuo gị iwu na a okwu nke sekọnd. Nwere ike ịgbakwunye ego site na iji otu n’ime usoro ịkwụ ụgwọ anyị tụlere na mbụ.
4. Malite ahia
Dabere na akaụntụ ahịa gị, ị ga-enwe ohere ịnweta ọtụtụ ọnụọgụ ego - ma n'ụdị fiat-to-crypto na crypto-to-crypto. Ọ bụrụ na ịmeela nyocha nyocha, ị nwere ike ịmalite ịzụ ahịa ozugbo. Niile ị chọrọ bụ ịhọrọ nke ụzọ ị chọrọ ahia na ebe a Buy ma ọ bụ na-ere iji.
Ego ị na-ere ga-ewepụ gị na akaụntụ nkwụnye ego, na uru ọ bụla ma ọ bụ mfu ọ bụla ga-egosipụtakwa na-akpaghị aka.
5. Na-ewepu ego
Ọ bụrụ n ’ị na-azụ mkpụrụ ego ndị ahụ site na inwete onwe gị, ị ga-enwe nhọrọ ịdọpụ cryptocurrency zụtara. Fọdụ ndị na-achụ ego na-ahọrọ ịchekwa mkpụrụ ego na obere akpa nke saịtị ahụ; agbanyeghị, nke a anaghị atụ aro ya n'ihi nsogbu nchekwa.
Ga-ewepụ mkpụrụ ego gị na obere akpa gị. Lee usoro ị ga-agbaso
Họrọ nhọrọ iji wepuo na saịtị ahia gi
Detuo-mado adreesị nke obere akpa gị na ngalaba mwepu
Tinye ego ị chọrọ ịdọrọ
Hazie ịkwụ ụgwọ ahụ
The cryptocurrencies kwesịrị ịdị na akaụntụ gị n’ime nkeji ole na ole ma ọ bụ aka elekere, ọ dabere na oge nhazi usoro ikpo okwu.
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa site na CFDs, usoro ndị ahụ dị ma ọ bụ karịa otu, belụsọ na ịnweghị ikike ịwepụ mkpụrụ ego ọ bụla. Ka ị na-azụ ahịa site na nkwekọrịta, ọ nweghị mkpụrụ ego na-agbanwe.
Kedu ihe ị ga-achọ na Platform Trading Cryptocurrency?
Banyere 2021, e nwere ọtụtụ narị usoro nhazi azụmahịa cryptocurrency dị na ahịa. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere saịtị CFD sara mbara nke na-enye ọtụtụ klaasị akụnụba, ụfọdụ nwere ọpụrụiche naanị na ọrụ mgbanwe mgbanwe cryptocurrency.
Kedu nhọrọ ị kpebiri iji (CFD platform ma ọ bụ mgbanwe cryptocurrency), ịkwesịrị ịtụle ụfọdụ tupu ị debanye aha.
Ofdị cryptocurrencies dị maka azụmaahịa.
Nhọrọ iji ahia site na CFDs
Ma leverage na-akwado
Ofdị ụzọ ịkwụ ụgwọ dị
Ofdị ụgwọ, ọrụ, na mgbasa
5 Kacha mma nyiwe ahia ahia nke 2021
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji rụọ ọrụ nyocha gị, anyị ga-atụle ugbu a ụfọdụ usoro ntanetị azụmaahịa cryptocurrency kachasị ewu ewu na 2021. Nhọrọ anyị nke ndị na-ere ahịa na-ejide ma ọ dịkarịa ala otu ikikere nchịkwa, na-akwado ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, ma kwe ka ị ga-azụ ahịa cryptocurrencies na gburugburu na-efu ọnụ ma nwee ntụkwasị obi.
1. eToro - Best Cryptocurrency Trading App maka Ndị Mbido
Ebe a na-azụ ahịa na-enye ohere ịnweta ọtụtụ puku akụrụngwa ego, gụnyere cryptocurrencies. eToro bụ onye ọsụ ụzọ na azụmaahịa azụmaahịa cryptocurrency kemgbe mbido Bitcoin. Taa, ha na-enye azụmaahịa obere akpa yana ọrụ mgbanwe maka ndị na-etinye ego crypto. Saịtị ahụ na-achịkwa FCA, CySEC, na ASIC. Naanị ezigbo ndị crypto dị maka ndị ọrụ US.
Iji malite ahia na eToro, ihe niile ị chọrọ bụ ego nkwụnye ego mbụ nke $ 200. Imepe akaụntụ dị mfe ma kwụ ọtọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido, ị nwere ike i copyomi ndị ahịa nwere ọmịiko iji kọwaa ihe ị na-eme. eToro nwere nhọrọ maka ma inwe cryptocurrency ma zụọ ha site na CFDs.
4. AVATrade - Ego nnabata 2 x $ 200
Dịka otu n'ime usoro izizi azụmaahịa iji nye ọrụ azụmaahịa ọnlaịnụ, AVATrade enyekwara ikike azụmaahịa crypto dị maka ndị na-etinye ego. Ndi isi ochichi isii na-achi achicha a, na achoputa na ego gi di n’aka n’aka.
AVATrade na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ mkpụrụ ego alt a ma ama, yana usoro iwu efu. Ọzọkwa, enweghị ego ụlọ akụ ebubo na azụmahịa ọ bụla, ma. Ọrụ ya dị na elekere, na saịtị ahụ na-arụ ọrụ na asụsụ 14.
Ndị ọrụ nwere ike ibili leverage nke 1:25, dabere na ọnọdụ ha. Maka ndị bi na EU, etinyere ego kachasị na cryptocurrencies na 1:25. Ikpokoro a na akwado MT4, MT5 na AVATrade nke ya.
Na nchịkọta, ebe a na-azụ ahịa cryptocurrency ruru ọtụtụ ijeri dollar kwa ụbọchị. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ahịa na-ahọrọ BTC / USD, ndị ọzọ na-ahọrọ ịzụ ahịa crypto-cross-pairs. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụghị naanị na ọnọdụ azụmaahịa cryptocurrency na-arụ ọrụ n'otu usoro 24/7, mana ọkwa mmiri dị ugbu a dị elu. Dị ka ndị dị otú a, nke a na-eme ka ọ dị mma nke ukwuu maka ndị na-etinye oge na ndị na-adịte aka.
Site na nke ahụ, isi ihe na-abịaru nso ịchụpụ ahịa cryptocurrency bụ inwe uche ghere oghe na ịghọta ihe egwu dị na ya. Ka ị na-azụ ahịa na ezigbo ego, a na-atụ aro ka itinye ego naanị ihe ị nwere ike ida.
Taa, e nwere ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa crypto na saịtị azụmahịa nke nwere ike ịkwado mkpa ego gị. Jiri ntuziaka anyị dị ka ntọala iji bido na ọchụchọ gị maka ikpo okwu kacha mma cryptocurrency. Gbalia che ma tulee ihe nile anyi kwuru na ha, i nweghi ihe isi ike ibido oru ahia gi na ngalaba nkpuru ego.
Gini bu ebe ahia ahia ahia?
Ebe a na-ere ahịa Cryptocurrency, ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe crypto, bụ weebụsaịtị na-enye gị ohere ịzụta, ree ma ọ bụ gbanwere cryptocurrencies. Nke a na - enye gị ohere ịnweta Bitcoin na mkpụrụ ego ndị ọzọ na - eduga na - agbanwe agbanwe.
Ego ole ka m kwesịrị ịmalite ire ahịa cryptocurrency?
Imirikiti ebe ahia na-achọ ndị nwere ego ka ha nwee ego nkwụnye ego iji debanye aha na akaụntụ ahụ. Nke a nwere ike ịbụ ihe ruru $ 100 ma nwee ike ịrị elu karịa.
Kedu ụgwọ dị iche iche na ahia crypto?
Saịtị ahia di iche na ego ha. Fọdụ ga-akwụ gị ụgwọ ọrụ ma gbasaa, ebe saịtị ụfọdụ na-enye ọrụ efu, ma kwụọ ụgwọ naanị n'ụdị mgbasa agbatị. Ọ bụrụ na ị na-ewere ikike nke cryptocurrencies, mgbe ahụ ụgwọ ahụ nwekwara ike ịgụnye ego nkwụnye ego na ego nkwụghachi yana ọrụ azụmaahịa. N'aka nke ọzọ, ahia site na CFDs achọghị ka ị kwụọ ụgwọ nkwụnye ego ma ọ bụ ọrụ.
Kedu otu esi achọta saịtị ahia ahia ahia?
Nwere ike ịchọpụta ma a na-achịkwa saịtị azụmaahịa ma ọ bụ na ọ bụghị site na weebụsaịtị ya. Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa site na CFDs, mgbe ahụ saịtị ahụ kwesịrị ịnwe ikikere site n'aka ndị ikike dịka FCA, CySEC, ma ọ bụ BaFin. I nwekwara ike chọọ na ndekọ aha ntanetị nke ahụ ndị a iji gosi na onye na-ere ahịa nwere ikikere.
Etu esi ebufe ego na akaụntụ ahia?
Ebe ahia ahia nke Cryptocurrency choro ka i nwee ego di njikere n’ime akuko iji kwado ahia di oso. Nwere ike ịgbakwunye ego site n'ọtụtụ usoro ịkwụ ụgwọ na weebụsaịtị onye na-ere ahịa, dịka nnyefe ego, nkwụ ụgwọ / kaadị kredit, ma ọ bụ e-wallets.
Enwere ikike itinye ego maka azụmaahịa cryptocurrency?
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụ ahịa cryptocurrencies na ntinye ego, ị ga-azụrịrị site na CFDs. A na-ekpebi ikike ịgba ụgwọ dị site na ọnọdụ ya, usoro nhazi ya, ahụmịhe gị n'ịzụ ahịa, yana atumatu ọ bụla nke onye na-ere ahịa na-ahazi. Mgbazinye ego ahụ nwekwara ike ịdị iche maka cryptocurrencies na ngwa ego ndị ọzọ.
Ee, azụmaahịa CFD na-enye ndị ọchụnta ego ohere ire ere na ire ere dị mkpụmkpụ.